Iibso VPS ama adeegeyaal khaas ah oo leh Linux ama Windows? | Laga soo bilaabo Linux
Iibso VPS ama adeegeyaal khaas ah oo leh Linux ama Windows?
Inta badan dadka aqriya maqaalkan waxay u adeegsadaan Linux kumbuyuutarkooda, dhowrkan ka mid ah waxaan nahay kuwa Linux ugu adeegsada server-yada aan maamuleyno, ama ha ahaadaan server-yada shaqadeena / shirkadeena ama kuwa kale ee aan ka soo iibsanay internet-ka.
In kasta oo la arkay oo la xaqiijiyay in Linux ay ku guuleysato suuqa serverka (iyo supercomputer), qaar wali xafiiskeyga ku jira ama asxaabteydii hore waxay i weydiiyaan Facebook: maxaad ugu iibsaneysaa server-yo Linux ah oo aanad u iibsaneyn Windows, haddii Windows ka fudud yahay maamulkiisa ? Mudanayaal, taasi waa su'aasha ina khuseysa 🙂
1 Adeegayaal, shaqo ama ujeedo?
2 Amniga, ilaalinta
4 Maamulka, qaabeynta
5 Khibrad iyo aqoon ka sarraysa dhammaan
6 Fikrad shaqsiyeed
Adeegayaal, shaqo ama ujeedo?
Servers waa 'kumbuyuutaro' bixiya adeegyo, u adeega isticmaalaha ama macmiilka adeegyada qaarkood, si kale haddii loo dhigo, ilaha qalabka serverka (kaydinta, farsamaynta iyo xusuusta) waa inay ahaadaan kuwo 100% diirada saaraya, oo loogu talagalay inay daboolaan baahiyaha macmiilka. . Miyaad u maleyneysaa inay macquul tahay ama macquul tahay in lagu kharash gareeyo ilaha jawiga garaafka leh Windows Server? Marka Windows Server la rakibo, jawiga garaafka ee Windows-ka waxaa lagu dhejiyaa Haa ama Haa, kaas oo cuna kheyraadka, wuxuu ku daraa darawallo badan oo ay u baahan tahay inuu isticmaalo, xawaaraha sawirada, wuxuu cunaa tiro aan la tixgelin karin oo GBs ah oo ka timid HDD, iwm
Dhammaan agabyadan ay ku shaqeynayaan jawiga agabyada garaafyada leh Windows-ka MA awoodo in loo isticmaalo in loogu adeego macmiilka degel, si looga dhigo keydka xogta inuu si dhakhso leh u shaqeeyo ama waqti yar qaato, iwm.
Marka, ugu horreyn, adeegaha leh Linux wuxuu na siinayaa suurtagalnimada rakibidda ama ma ahan jawi garaaf ah (taas oo aan loo baahnayn gabi ahaanba, maaddaama Linux wax walba lagu sameyn karo amarro), sidaas awgeedna lagu keydiyo ilaha qiimaha leh ee qiimaha leh Server leh Windows nama siinayo ikhtiyaarkaas, waxay rakibaysaa jawiga garaafka ee loogu talagalay 'sahlanaanta' weyn ee maamulka, iyadoo la isticmaalayo ilaha qalabka ee aan waligeen ka soo kabsan karin.
Ma aha wax qarsoodi ah in Linux ay ka ammaan badan tahay Windows, sababaha sababta Linux uga amni badan tahay Windows iyo Pablo iyaga ayaa uga tagay maqaal in yar ka hor. Waxaa jira dhowr mana qorsheynayo inaan ku sharaxo dhammaantood halkan laakiin halkii aan ka xusi lahaa dhowr:
Linux uma baahnin dildilaac, keygens ama waxyaabo kale oo la mid ah oo sida caadiga ah qaada fayrasyo ​​ka badan jiirka qarnigii 16aad.
In Linux waxaan leenahay waxa loogu yeero keydka, oo ka kooban ku dhowaad dhammaan barnaamijyada aan u baahan doonno. Intii ay ku jirtay Windows-ka dhammaan software-ka waa la kala firdhiyey, sidaa darteed waxaa jirta fursad weyn oo ah in qof uu khalad sameeyo, oo aysan dib u eegin khubaro tiro badan, oo nidaamkeenna u nugul.
Windows-ka runti wuu gaabis yahay marka laga hadlayo cusbooneysiinta amniga, halka Linux-ka aan ku yeelan karno dhowr casriyeyn amniga ah isla usbuuca, sixitaanka cayayaanka, iwm
Nidaamka adeegsadaha ee Linux shaki la’aan wuu ka sareeyaa kan Windows-ka, rukhsadaha, sifooyinka, milkiilayaasha, Windows-ka wax badan baa laga doonayaa.
Windows-ka waa inaad ku leedahay antivirus, antimalware, antispyware, antiphishing, oo waxaan hayaa 'antis' dhowr ah oo aan ku xuso, halka Linux ku filan firewall ku filan yahay.
Marka la soo koobo, waxaa jira sababo badan oo Linux uga sareyso Windows-ka dhanka amniga, waxaan kugula talinayaa inaad aqriso qodobka aan kor kusoo xusnay.
Ku dhowaad wax kasta oo adduunka maanta ka jira waxaa lagu dhaqaajiyaa ama lagu helaa lacag, adeegeyaashu kama reeban yihiin sharciga. Markaan dooneyno inaan ku iibsanno server Windows ah, waxaan aragnaa qiimo had iyo jeer ka qaalisan kan aan ku aragno Linux. Aynu tusaale u soo qaadanno bixiye kasta, tusaale ahaan aan dib u eegno qorshooyinka VPS ee SeedVPS.com, haddii aan aragno qorshayaashooda Windows iyo Linux waxaan u nimid gabagabada soo socota:
VPS oo leh Linux iyo 2Cores, 250GB oo HDD ah iyo 1GB oo RAM ah ayaa ku kacaya € 19 bishii, taas oo ah, $ 296.4 sanadkiiba.
VPS oo leh Windows iyo 2Cores, 250GB oo HDD ah iyo 1GB oo RAM ah ayaa ku kacaya month 24 bishii, taas oo ah, $ 374.4 sanadkiiba.
Si kale haddii loo dhigo, waxay ku dhowdahay $ 80 ka qaalisan in lagu iibsado VPS-ka Windows-ka marka loo eego mid laga iibsado Linux.
Sida aad arki karto, haddii aan iibsanno server Linux ah ayaa si weyn uga jaban in lagu iibsado mid isku qalab ah laakiin leh Windows.
Sidii aan ku sheegay bilowgii, ma jiraan dad yar oo tixgeliya in maaraynta server-ka ku shaqeeya Windows-ka ay aad uga badan tahay, aad uga fudud tahay mid lagu maareeyo Linux. Halkan xitaa waan kugu raaci karaa, ugama jeedo inaan ku qanciyo qofna in xafidaada 15 khadadka dheer ee amarka adag ay tahay wax ka fudud in la sameeyo marka laga reebo furitaanka daaqad oo aad riixdo 10 badhan, ujeedkeygu ma ahan inaan qof khiyaaneeyo.
Faahfaahinta ayaa ah haddii aan doorano midka ugu fudud dhamaadka waxaan bixin doonnaa qaladka. Waxaan ku siinayaa tusaale guud, oo inbadan oo ka mid ah maamulayaasha shabakadu soo mareen. Kaydinta, keydinta qaabeynta iyo diiwaanada: Haddii aan maamuleyno server Linux ah oo aan u baahannahay inaan ka dhigno qaabeynta 100 adeeg, kaliya waa inaan ka sameysannaa nuqul ka mid ah / iwm / galka meel kale waana intaas, haddii aan rabno inaan keydinno nidaamka nidaamka, waa ku filnaan laheyd inaan nuqulo waxa ku jira / diiwaanka / meelo kale iyo ... voila, waa wax fudud. Windows-ka sidee ahaan karaa? ...
Haddii aad maamusho adeegaha Windows-ka, sidee u badbaadin kartaa isku xirnaanta DNS, DHCP, Proxy, MailServer, iwm? Maaddaama qaabeynta kuwan aan lagu keydin isla buugga, sida qaabeynta qaar badan oo ka mid ah aan loogu keydin faylalka qoraalka, laakiin lagu keydinayo gudaha db gudaha ah .exe ama wax la mid ah, samee kayd dhammaan qaabeynta ee server-ka wuxuu noqonayaa wax runtii daal badan, culusna in la qaado.
Waxaa nalagu qasbi lahaa inaan isticmaalno codsiyo badan oo dibadeed ah, tusaale ahaan, codsi daadinaya qaabeynta wakiilka (ISA Server) oo aan ku nuquleyno meel kale, codsi kale oo loogu talagalay DNS, iyo wixii la mid ah adeeg kasta. Haa, Windows wuu fududaan karaa in la maareeyo dad badan laakiin, waqtiga muhiimka ah, wuxuu noqdaa nidaam leh xadad aad u fara badan, xadadana aad u tiro badan.
Khibrad iyo aqoon ka sarraysa dhammaan
Waxaan ku sharixi doonaa tan, aad iyo aad u kooban, imisa maamuleyaal shabakadeed oo adeegsada Windows ayaa yaqaan oo waliba yaqaana sida loo maareeyo shabakadaha Linux? … In yar, aad u yar, ku dhowaad midkoodna kiiskeyga, halka imisa maamuleyaal shabakadeed oo adeegsada Linux ay yaqaanaan sidoo kale yaqaana sida loo maareeyo shabakadaha Windows? All Dhamaanteen waxaan dhihi lahaa 🙂
Shakhsi ahaan, sannado badan ayaa laga joogaa tan iyo markii aanan u baahnayn in aan maareeyo server-yada Windows-ka (taas oo aan ku qanacsanahay!), Laakiin haddii aan mar kale u maareeyo Windows Server, wax dhib ah ma lahaan doono gabi ahaanba, waan la qabsan karaa ku dhowaad aniga oo aan il-biriqayn ... halka, qaarna Waan ogahay inaan ku maamulo Windows waxaan siiyaa mid ka mid ah server-yada aan ku leeyahay Linux, waxa ugu horeeya ee uu ii sheegi doono waa inaanan albaabka ka bixin, oo aan tuso sida Linux u shaqeyso maxaa yeelay isagu malaha fikirka ugu fog ee 'that' what waxaad ku rakibtay adeegaha.
Oo waxaan la yaabanahay, ma maamulka shabakad baa? Qof gabi ahaanba aan awood u lahayn maaraynta server adeegsiga nidaamka ugu caansan serverka hawlgalka?
Waxaan maamulayay shabakado dhowr sano, waxaan ku bilaabay sida kuwa badan Windows Server, oo socdey wax ka yar 4 bilood server-kayga. Markii aan ku guuleystey inaan rakibo FTP, HTTP, DNS, DHCP iyo sidoo kale adeegsi wakiil oo ku saabsan server-ka P128 oo wata 3MB oo RAM ah oo ku jira server leh 128MB oo RAM ah oo ku jiray shirkaddaydii hore, iyo intaas oo dhan iyadoo aan la cunin 100MB oo RAM ah, Waa maalin waxaan is iri: «Ilaahow sida aan si xun ugu lumiyay waqtigeyga Windows«.
Waxaan ku isticmaalaa GNU / Linux kumbuyuutarkeyga ArchLinux, taleefankayga casriga ah Firefox OS, on my Debian server, haddii aan lahaa a kiniin Waxaan sidoo kale u maleynayaa inaan ku rakibi lahaa Linux + KDE-Plasma si kale ama u isticmaal Android, runti hadaan isku dhex dhex lahaa laptop iyo kiniin sida Asus Transformer ama qof kale oo wax ku akhriya mid ka mid ah bogagga aan had iyo jeer ku laabto (sida BuuggaPC o phronix) sidoo kale wuxuu heli lahaa hab lagu rakibo qaar ka mid ah 'Linux distro'. Sikastaba, maqaalku halkaan ayuu ku egyahay, waxaan rajeynayaa inay ahayd, sidii had iyo jeer ahayd, dantaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Lagu taliyay » Iibso VPS ama adeegeyaal khaas ah oo leh Linux ama Windows?
Haduu ogaan lahaa sida loo maamulo VPS si ka wanaagsan ... cashar wanaagsan oo LEMP ah ayaa ka maqan CentOS ama Debian 🙂
Walter cad dijo
Waad booqan kartaa casharkaan, wuxuu ku qoran yahay Ingiriis laakiin aad buu u wanaagsan yahay 🙂
Sida loo rakibo Linux, nginx, MySQL, PHP (LEMP) oo ku duuban Ubuntu 12.04
Sida loo rakibo Linux, nginx, MySQL, PHP (LEMP) oo ku duuban CentOS 6
Waa mid ka mid ah casharro badan oo aniga ah, aniga ahaan, vps-ka ugu fiican dhammaantood:
Iyada oo kaliya $ 5 / bishii ($ 0.007 / h) waxaad leedahay:
20GB Solid State Drive SSD (Super Fast)
1TB Wareejinta Billaha ah
Dhamaan server-yada waxay la yimaadaan 1GB / sec. interface network.
kaliya weyn 😉
Waad soo geli kartaa Halkan, wixii faahfaahin ah.
Jawaab Walter White
Sida GNUTransfer ka dibna Alvotech, ma aanan helin midna, waxaan si daacad ah u leeyahay sidaas.
Haddii aad rabto inaad ka fogaato inta badan maamulka, waxaad dooran kartaa xalka horay loo rakibay, shirkado badan ayaa bixiya VPS ama server-yo gaar ah oo leh LEMP horeyba diyaar ugu ahaa inay isticmaalaan ...
Bal u fiirso dalabkan:
Aad u xiiso badan oo dhammeystir qoraalkan, aad ayaan uga helay 🙂 Si dhammaystiran ugu waafaqsanahay wax walba.
Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga
naxariis daran !!! Kaliya waxaan dhihi karaa taas, maqaal aad u wanaagsan
Waad ku mahadsan tahay, waxay ahayd farxad.
Gabi ahaanba waad khaldan tahay, waad rakibi kartaa adeegaha daaqadaha adigoon lahayn jawi garaaf oo kaliya qaab konsoleer ah, qunsulku wuu ka horumarsan yahay cmd-ka caadiga ah, iskama aanan dayin, xitaa ma ahan inuu gaaro ciribta linux laakiin ma qori kartid wax sidan oo kale ah adigoon ogeyn, waxaan haystaa nuqul ka mid ah Windows Server 2012 iyo qaabka caadiga ah kuma jiraan jawiga garaafka.
Sidoo kale waa inaad aragtaa inay jiraan noocyo kala duwan oo adeegeyaal ah, haddii aan u adeegsanno shabakadaha shabakadda shaki kuma jiro in Unix kasta uu ka sareeyo Windows-ka laakiin markaan ka hadlayno domain iyo serverka sarrifka ah ee Linux waxaa jira waxyaabo kale oo bilaash ah laakiin waxaad ku qasmi kartaa xoogaa.
Kaalay, waxaa jira xalal badan oo Microsoft leedahay oo leh lahaansho laakiin iyagu yihiin xalal ganacsi. Ilaa aad ka hesho wax soo saar lacag bixin ah oo laga helo Novell ama Red Hat, waxa shirkadaha waawayn ay kaydiyaan kharashaadka waxay ku dambeeyaan qarashka ku baxa taageerada sababo la xiriira aqoonta sare ee looga baahan yahay in lagu maareeyo wax bilaash ah oo aan lahayn taageero "rasmi ah".
PS: Anigu waxaan ahay Linuxero laakiin sida ay wax yihiin.
Shaki la'aan, Diiwaanka Firfircoon ee Windows waa mid ka mid ah guulaha ugu fiican, si kastaba ha noqotee waxaan doorbidaa inaan isticmaalo waxyaabo kale sida ClearOS ama Zentyal, Linux waxay ku dhowaad 100% ka maamuli kartaa dalabka webka. Samba4 wax badan ayey horumarsan tahay, laakiin waxbadan ayey ku jirtaa dhinacan gaaritaanka AD, si kastaba ha noqotee sidoo kale waxaa lagu rakibi karaa iyada oo loo marayo Kerberos + openLDAP + Samba noloshiisa oo dhan, macaamiisha Windows-na xitaa ma ogaan doonaan haddii adeegu yahay Windows Server leh Tusaha Firfircoon ama Linux oo leh 'wax' dheeraad ah.
Tusaha Firfircoon laftiisa ayaa u muuqda mid culeys ku ah heerka garaafyada. Illaa iyo hadda, ma aanan awoodin inaan sameeyo tusaha firfircoon sida loogu talagalay Windows Server 2003 (si aan u arko haddii Server 2008 aan sameyn karo, laakiin hadda, waxaan ku tababbarayaa sida loo sameeyo galka la wadaago Samba).
GNU / Linux iyo BSD way ku fiican yihiin naftooda, labadaba heerka server-ka iyo waliba heerka server server-ka. Dhibaatada ayaa ah nooca keydadka macluumaadka ee aad ku shaqeyn doontid (PostgreSQL waa ikhtiyaar aad ufiican oo ka duwan Microsoft ee behemoth SQL Server), laakiin xitaa Oracle waxay bixisaa taageerada nidaamka keydka xogta xitaa GNU / Linux (xitaa haddii aad neceb tahay astaamaha Qorrax, Oracle had iyo jeer waxay soo saartaa waxa ay leedahay). Sikastaba xaalku ha ahaadee, kharashka maalgashiga Novell iyo Red Hat OS's badanaa waa mid aad u jaban marka la barbar dhigo adeegyada ay Microsoft bixiso muddada dhow iyo tan dheerba, laakiin dhamaadka maalinta, waa xulashooyin aad u xiiso badan.
In kasta oo ay tahay xawilaadda, GNU / Linux ayaa iska amaahiya iyada, maaddaama qaar badan oo ka mid ah supercomputers-ka halkaas ka jira maalmahan ay adeegsadaan GNU / Linux in yar oo ka reebanna ay isticmaalaan HP-UX ama sharci ah UNIX (dhab ahaantii, in haa waa madax xanuun dhab ah inaad u maamuli karto sida aad rabto).
Waxaan kuu sheegayaa Ciise, waxa ugu fiican ee ay Windows hadda haysato waxaa loo yaqaan 'Active Directory', waa wax aan laga doodi karin, laakiin sida had iyo jeer ah, waxaan heli karnaa beddelaado noo gaar ah oo aan ugu mahad celineyno openLDAP iyo Samba (haddii aan leenahay macaamiisha Windows). Dhamaadka, Tusaha Firfircoon maahan wax ka badan LDAP.
Maxaa ku kici kara wax yar oo shaqo ah si loo sameeyo adeeg sidan oo kale ah? Waxay noqon kartaa, laakiin waxaan hubaa in markii la qaabeeyo ay fududaan doonto dayactirka / cusbooneysiinta Waad ogtahay, faa iidooyinka faylasha qaabeynta ee "la ridi karo", dib u bilaabi adeegga oo soco.
Kaalay, anigu waxaan ahay Linuxero mar walbana waxaan doorbidi doonaa inaan isticmaalo beddelka bilaashka ah halkii aan ka isticmaali lahaa midka gaarka ah, gaar ahaan SMEs halkaas oo qiimaha dhaqaale uu muhiim yahay, laakiin sidoo kale waxaa jira waxyaabo badan oo la arko.
Tusaale ahaan, mar aan kula taliyay Nagios inuu u adeegsado madaxtinimada jamhuuriyada (Kolombiya) oo xitaa aan ka sameeyay tijaabooyin iyaga ka mid ah wayna ku farxeen, laakiin aakhirkii waxay go'aansadeen inay iibsadaan xalka lahaanshaha ee aan ahayn xaqiiqda keydinta dhaqaalaha laakiin taageerada, marar badan waxay ahaayeen waxay u baahan tahay shirkad halkaas wax ka taageerta, taasi waa sababta ay madaxweynenimada ugu leeyihiin Windows iyo Linux server, laakiin Linux waxay leeyihiin xalalka Red Hat, oo dheeraad ah oo ku saabsan taageerada shirkadda.
Marka la eego dhaqaalaha, had iyo jeer waa inaad sameysaa qiimeyn ku saabsan sababta oo ah inkasta oo Linux ay lacag la'aan tahay, mararka qaar waxaad ku dambeysaa inaad bixiso wax badan oo aqoon ah marka loo eego wax kasta oo kale, waxaan ka qaaday 50 doolar saacaddii wax kasta oo aan ku sameeyo server Linux ah, ha ahaato qaabeynta, taageerada, iwm. Mararka qaar way ka jaban tahay in la rakibo Windows-ka, la siiyo laba qasab waana intaas, xitaa haddii ay ka xasilloon tahay laakiin ugu yaraan waa wax ay dad badani qaban karaan, dhinaca kale, qof walbaa ma gaadho Linux. Taasi waa sababta aan lacag fiican uga helay Linux 🙂
Cinwaanka boostada waa «iibso VPS (…)»Oo illaa iyo hadda, ma arag wax VPS ah ama adeeg bixiye u heellan oo bixiya Windows Server 2012, oo ah kan bixiya Windows Server-ka ugu badan ee 2008, oo ikhtiyaar u leh inuu naafada u noqdo jawiga garaafka?
Maqaal aad u wanaagsan !! Linux aad ayey ugafiican tahay Windows!
Tabaruc aad u fiican! sacab…
Ku jawaab Rito
Sidii ay halkaas uga sheegeen, waxaa jira khaladaad kala duwan iyo aragti qalloocan. In kasta oo, kaalay, waxaan rajeynaynaa, in qoraha uu wax ku qoro "FromLinux" ;-P.
Laga soo bilaabo Windows 2010, nooca "ServerCore" oo aan lahayn qaab muuqaal ah ayaa lagu rakibi karaa. Waana ogahay inay aad u adag tahay in la isticmaalo. AAD UGU CASRISAN. Laakiin waxay muujineysaa taas mid aad u awood badan.
1-Looma baahna dildilaacyo, iwm: adeegyo, Windows-ka midna. Iyagu waa qayb ka mid ah OS-ga oo si badbaado leh ayaa loogu rakibay sababtaas awgeed. Qofna waa inuusan ku rakibin barnaamij dillaacsan serverka (ama meel kasta, waad i fahantay ...). Dildilaaca waxaa badanaa loo isticmaalaa barnaamijyada isticmaalaha (xafiiska, sawir-qaadaha, iwm), looma isticmaalo adeegyada.
2-Rakiibinta softiweer baahsan: sida aan ku sharaxay qodobka 1aad, marka laga hadlayo adeegyada arintu sidaas maahan
3-Cusbooneysiinta amniga: Ma ogi in Win ay ka gaabinayso soo dhaweyntiisa. Waxa xun waa baahida loo qabo in dib loo bilaabo kumbuyuutarka markii la rakibayo
4-Diiwaangelinta nidaamka ogolaanshaha: wadar ahaan khilaaf. Xilligan Windows-gu aad buu uga wanaagsan yahay oo wuxuu u oggol yahay xakameyn ballaaran.
5-Looma baahna waxyaabaha lidka ku ah: aragti ahaan run maahan, laakiin ficil ahaan way sameyn kartaa. Ka waran haddii aan la beddelin waa haddii ay dhacdo inuu yahay server mail, waxaad weli u baahan doontaa antipishing.
Hadaad adigu maareyso, sida iska cad Linux waa ka raqiisan tahay. Haddii qof kale maamulo, maya. Maamulaha aqoonta Linux leh ayaa kugu soo dallacaya amaan badan.
Qofkasta oo dhaha sameynta keydka kumbuyuutar sameynta ee Linux waa fududahay hubaal in waligood uusan noqonin Bacula ... haha Kaftan. Diiwaanka / iwm waa run. Laakiin waxaan hubaa in Windows-ku uusan u dhib badnayn sida muuqata. Waxaa jira codsiyo ka shaqeeya shaqooyin wanaagsan dadaal yar. Iyo iyada oo loo marayo Diiwaanka Firfircoon ee qaabeynta ayaa lagu soo rogay inta udhaxeysa server-yada.
Waan jeclahay Linux, laakiin waxyaabaha sida ay yihiin.
Wadar ahaan heshiiska aan kula jiro, waxaan u adeegsadaa linux waxkasta oo aan jeclahay, laakiin macnaheedu maahan in xulashooyinka kale ay xunyihiin (Marka laga reebo arrimaha falsafada iyo dhaqaalaha), waxaa jira waxyaabo wanaagsan oo ay jiraan waxyaabo xun, waxaa i dhibaya qoraalo xiran iyo taageerayaal, markii aanan xitaa ogeyn tijaabiyeen badeecada ay dhaleeceynayaan kahor nooc 4 + sano kahor ah. Waxaan u maleynayaa inay tahay inaad ujeedo gaar ah ka yeelatid arrimahaas.
Waxaan isticmaalaa 2 vps hal linux iyo one windows oo labaduba waxay iila muuqdaan kuwo xasiloon oo la istcimaali karo, daaqadaha waxaan u isticmaalaa xitaa serverka ciyaarta maxaa yeelay xudunta sadexnimada (serverka gaarka loo leeyahay ee loo yaqaan 'wow wow server') had iyo jeer waa la cusbooneysiiyaa oo aan laheyn wax daaqado ah nooca windows. Waxaan sidoo kale aasaasay macaamiisha Mu Online server ee u baahan daaqadaha, runtuna waxay tahay inaanan waligay wax cabasho ah qabin.
PS: Uma gudbin liistada firfircoon ama wax la mid ah, waxaan ka barnaamij badanahay barnaamijka maamule server.
Waxaan ku celinayaa wixii aan ku idhi faallo kale:
1. Dildilaac. Xaq, markaa qof walbaa waa inuu (oo uusan sarbeeb ahayn) ku iibsan ISA Server dhammaan fiilooyinka loo baahan doono, iyo sidoo kale adeegyada kale ee Windows Server uusan ku darin xudunta. Nasiib darrose, dadka intiisa badani uma fikiraan sidaas. Tusaale kale (markasta maahan in la xuso Server-ka ISA) waa Kerios ... ama adeege boosteejo leh MDaemon, waxay tusaale u yihiin wixii aan soo arkay, dadka wax badan baa jabsada.
2. Kerios, MDaemon, qolalka amniga ... waxaas oo dhan waxay ku yimaadaan keyd Windows Server ah?
4. Arrin la xiriirta fikrad shaqsiyeed ama dhadhamin, wax kasta oo aan dooneyno inaan ugu yeerno ... Weligey iskuma dayin inaan qaribo qayb dhan oo ka mid ah NTFS, waxaa lagama maarmaan noqon lahayd in la arko haddii la sameyn karo iyo sida ay u shaqeyso.
5. Waxyaabaha ka soo horjeedka, sida ku cad Microsoft Windows waa OS-ka adduunka ugu amniga badan, ficil ahaan inbadan ayaa runta og.
C-Qiimaha. Xaq, haddii qof kale maamuli doono server-kaaga Linux waxaa laga yaabaa inuusan bilaash ahayn, hase yeeshe, haddii qof uu yahay "maamule shabakadeed" muxuu cadaabta ugu baahan yahay inuu qof kale lacag siiyo si uu shaqadiisa u qabsado? Karti la'aan ama dhexdhexaadnimo?
D-Kaabta. Bacula waa hal codsi oo keliya oo loogu talagalay, mid aad iyo aad u dhammaystiran. Si kastaba ha noqotee, aniga qudhaydu waxaan barnaamijka ka dhigaa qoraalkeyga bash ee daadiya DBs, nuqul faylasha qaabeynta, rogrogmadaan oo keydi, hubi md5 wax kasta ... iwm iwm. Weligay ma arag wax sidaa u fudud oo la sameeyo. Inta lagu jiro Windows, hal codsi ayaa keydin kara wax kasta oo muhiim u ah nidaamka? Really Runtii waan ka shakisanahay.
Ku saabsan tan hore:
Sidii ay halkaas uga sheegeen, waxaa jira khaladaad kala duwan iyo aragti qalloocan. In kasta oo, kaalay, waa in la filayaa, qoraa wuxuu ku qoray "FromLinux"
Mana ka faalloon doono arrintan, maxaa yeelay "tifaftiraha" sida aad iigu yeeraan, ma haysto waqti iyo xiise toona inuu kala hadlo Windows Server dadka kale, iyadoo aan loo eegin sida ay wax u aqoonsan yihiin ... ama u aaminsan crean
Marka hore: waligaa ha dhaliilin awoodaada maamule nidaam, dhamaanteen waan ognahay sida wanaagsan ee aad ugala shaqeyso Linux.
Ta labaad: nasiib daro maahan in qof walbaa awood u leeyahay inuu qoro bashkiisa sidaada oo kale ah, lagana yaabee inuusan qof walbaa rabin inuu sidaas sameeyo, waxaad ugu yeeri kartaa "Incapacity" ama "Mediocrity", waxaad doonto, laakiin aduunyadan iyaga ayaa ka buuxa .
Seddexaad: Jawaabtaada ku saabsan vps-ka aad aragtay waa 2008 oo keliya, waa sababta oo ah weligaa xiiso uma lihid inaad mid raadsato mid 2012 la mid ah (aniga sidoo kale ma aanan sameyn), laakiin haddii aan rakibo, sidaad ogtahay, adduunka hanti-wadaagga ah ee aan ku jirno ayaa doorbidaysa kombiyuutarka microsoft ee waxbarashada ka hor inta aan la barin sida loo qaabeeyo Debian ama CentOS.
Tan afraad: Waxa kaliya ee aan dhaleeceynayaa waa indha sarcaadka indha la'aanta ah ee kaa dhigaya inaad daabacdo oo aad xaqiijiso sifooyinka qaarkood ee nidaam kale (si kasta oo aad uga soo horjeeddo) oo aan run ahayn, inta ka hartay boostada ma aanan aqrin. Taasi waa qalad gebi ahaanba "Haa" ama "Haa" way i niyad jabineysaa, in kasta oo aan had iyo jeer ku jeclahay qoraaladaada qaabkooda farsamo iyo tusaalooyinkaaga xun. Laakiin waa inaad marwalba runta hore usocota oo aad qirataa markaad qaldan tahay.
Intaas waxaa sii dheer, inteena kale horey ayaan u ognahay dhamaan qasaarooyinka Windows, hadii kale waxaan kuu xaqiijinayaa inaanan ku aqrin doonin, ama @elav, ama @usemoslinux ama dhamaan Qorayaasha halkan ku daabaca.
Salaan kadib waxaadna moodaa inaad aad u xanaaqsantahay inkastoon ujeedkeygu aheyn, hadaan ka xanaaqo raali noqo, sidaad fikirkaaga iyo tayda u dhiibatay
Waan ka xumahay haddii faalladayda hore u muuqatay ama aad u ahayd ... kedis ah, toos ah ama xitaa edeb daran. Dulucdu waxay tahay in waxa ugu horeeya ee aad tidhi, waxaan u qaatay gef ama wax yar oo aniga xaggayga ah, laakiin in ka badan waxkasta oo ku saabsan barta
Marka laga hadlayo awoodda ama inaadan ku qorin qoraaladaada gaarka ah bash, halkan waxaan ku wadaagay mid si fudud u fudud ... oo aan lahayn wareegyo badan ama jeegag ama wax: https://blog.desdelinux.net/script-para-backups-automaticos-de-tu-servidor/
Marka la eego daabacaadda wax aan aqoon lahayn, qodobkan ... run, anigoo daacad ah fikrad kama lihi in Windows Server 2010/2012 loo oggolaaday rakibidda iyada oo aan la helin jawi garaaf leh, si daacadnimo ah uma aanan aqoon. Kee, hadda shaki iiga jira, ma u oggolaaneysaa in si buuxda loogu maareeyo adeegyada sida Tusaha Firfircoonida ama Server ISA illaa CMD-gaas? Waa su’aal uun kacday. Dhinaca kale, waad ku mahadsan tahay waxa aad ka leedahay qoraalladayda.
Aragtidaada ima dhibin, runti aniga ima dhibin ... waxba igama gelin qirashada in aanan ka warqabin CMD-da keenta noocyada cusub ee W. Server, waxa i dhibay waxay ahayd waxa ugu horeeya ee aad dhahdo , oo waxaan ku soo xigtay faallooyinka kale, ma aqaano ... waxaan dareemay sida weerar goobta ah.
Wanaagsan, runtu weligeed may sheegin waxaad sheegatay, waxaan ka idhi isha indha la 'laakiin marna kamaan hadlin "Isagu waa tifaftire ka socda FromLinux."
Salaan kadib dhibaato malahan kani waa degelkeyga labaad kadib google maalin walba, waligey iskuma dayi doono inaan ku xumeeyo, kaliya mararka qaar waxaan u maleynayaa in dadka isticmaala Linux ay aad uguxiranyihiin dhadhankeena si aanan u arkin waxa GNU / Linux ka maqan inay runti gaaraan noqo kan ugu horeeya, oo aan ku xirnayn serverka aan ognahay inaan sifiican usameyno, hadii uusan ku jirin desktop-ka, waxay ila muuqataa inay tahay inaan ixtiraamno tartanka oo aan ogaano sida loo kala saaro awoodooda, inaan ogaano halka aan weerari karno, sida ay nala sameeyaan.
Laga soo bilaabo Windows 2010, waxaad ku rakibi kartaa nooca "ServerCore" oo aan lahayn qaab muuqaal ah. Waana ogahay inay aad u adag tahay in la isticmaalo. AAD UGU CASRISAN. Laakiin waxay muujineysaa taas mid aad u awood badan.
Awood? Waa maxay macnaha? Miyaad maamuli kartaa codsiyada aan ku xusay faallooyinka kale ee ka imanaya qalabkaas? Oo hadday dhib badan tahay, maxay faa'iido u tahay isticmaalka Windows?
Uma baahnid inaad dillaacdo dalabyada horay loogu soo daray, sidoo kale uma baahnid OS marka si sharci ah loo iibsado.Laakiin immisa ayey sameeyaan? Ugu yaraan qofna kuma jiro Cuba.
Eeg, Windows xitaa si aad u neefsatid waxaad u baahan tahay inaad dib u bilowdo ..
WTF? Waxaan aad uga shakisanahay in Windows-ka aad haysato nidaam ogolaansho fayl ah oo ka fiicnaanaya chmod. Waan ka shakisanahay, oo fadlan, hadaan qaldanahay, cadee.
Waxaa jira codsiyo ka shaqeeya shaqooyin wanaagsan dadaal yar. Iyo iyada oo loo marayo Diiwaanka Firfircoon ee qaabeynta ayaa lagu soo rogay inta udhaxeysa server-yada.
Ma laha barnaamijyo dhinac saddexaad ah? Miyayna u muuqan wax la yaab leh, oo aan raaxo lahayn oo aan caddaalad ahayn in Microsoft lafteeda aysan ku siinaynin codsiyo si aad uga dhigto dib-u-habeyn wanaagsan oo adeegyadeeda ah?
Hombe, anigu waan ka sii diidanahay daaqadaha qof kasta, laakiin wax ay tahay in la aqoonsado ayaa ah in Windows wax badan ka fiicnaadeen, gaar ahaan xagga amniga. Xitaa haddii aan ka hadalno kombuyuutarrada, nidaamka oggolaanshaha Windows 8 isbarbardhig kuma sameyn doono qashinka Windows XP, isku day inaad beddesho dll ku jira faylka System32 waadna arki doontaa;).
Hadda maadaama mawduuca uu yahay adeegeyaal, waxaan kuu sheegi karaa in nidaamka ogolaanshuhu uu aad iyo aad u kala duwan yahay.
Windows Server-ka si wanaagsan loo maareeyay waa mid xasilloon oo ammaan ah, waxa aan necbahay ayaa dib loogu bilaabayaa cusbooneysiinta, in kasta oo Linux ah waqtiga kaliya ee aan ku qasbanahay inaan dib u bilaabo waa markii cusbooneysiinta kernel-ka la dhammeeyo.
Run ahaantii waxaad ku tiraahdo boostada, runtu waxay tahay in Linux wax walboo lagu sameeyo amarro loomana baahna in lagu rakibo jawi garaaf ah
Waad ku mahadsan tahay booqashadaada iyo faallooyinkaaga.
Qodobka waa in la saxaa. Windows Server wuxuu oggol yahay rakibo aan lahayn jawi garaaf ah (sidii horeyba loo tilmaamay) waxaana lagu maamuli karaa amarrada cmd
Habka loo yaqaan 'Sever Core' wuxuu furaa isdhexgalka garaafka (explorer.exe). Waxa kaliya ee kuu furmaya waa Windows Console interface (ama amarka degdega ah), oo sida powerhell u yimaado asal ahaan, waxaad kaliya qortaa "ps" si aad ugu isticmaali karto Windows Server qaabka konsalka sida ay tahay (Windows console-ka sida oo kale iyo Powershell la'aanteed waa waqti lumis).
Waxa aan rabay in aan idhaahdo waa la rakibikaraa iyadoo aan laheyn jawiga desktop-ka caadiga ah. Muuqaal yar oo Windows 3.1 u eg oo muuqaal ah ayaa u muuqda. Hadaad u fiirsato maqaalka, wuxuu ka hadlayaa "jawiga garaafka" sida inuu yahay jawiga desktopka (garaafka xawaaraha?).
Noocee ah Windows Server-ka ayaa u oggolaanaya rakibidda iyada oo aan lahayn qaab muuqaal ah?
Waxaan u maleynayaa inuu jiro Server Core oo ka socda Windows Server 2008.
Waxaan fursad u helay in aan ku rakibo "shaashad-la'aan" Windows Server noocyadiisii ​​ugu dambeeyay, qofkii u maleeyana inuu waalan yahay, waxaad sameyn kartaa si la mid ah tii la socota Linux.
Su'aashaydu waxay tahay, sidii Windows novice: ISA Server, Active Directory, IIS, iyo dhamaan adeegyada Windows miyaa lagu isticmaali karaa CMD?
Taasi waa gebi ahaanba run, kumbuyuutarka kumbuyuutarka waa mid aad u awood badan, laakiin dhammaanteen waan ognahay taas.
Markaa waxaan la yaabanahay, maxay wanaagsan tahay in la rakibo Windows Server iyadoon la helin jawi garaaf ah haddii, aakhirka, aynaan isticmaali karin IIS, ISA Server, Tusaha Firfircoonida iyo inta kale oo dad badani hore u yaqaaneen? Waa maxay macnaha ay leedahay
Waan ku celinayaa, waa shaki uun 😀
Haddii Tusaha Firfircoon laga maamuli karo PowerShell http://technet.microsoft.com/es-es/library/dd378937(v=ws.10).aspx.
Ama halkan: https://www.digitalocean.com/pricing
Waa maxay goobta uu Walter faallo ka bixinayo iyada oo aan loo dirin inta u dhexeysa.
Maqaal aad u wanaagsan laftiisa, si aan daacad u noqdo. Laakiin si runta loo sheego, Windows Server 2008 kor ayaa leh qaabka xudunta u ah serverka, kaas oo kaliya ku tusaya daaqad ay kaliya kuu ogolaaneyso inaad isticmaasho PowerShell (taas oo ah xadidan marka loo eego bash) runtuna waa inaanay marar badan Windows Server kuu oggolaanayn inaad sameysid keyd sida Ilaah Mandates (haddii aad sameyso, waa inaad isticmaashaa Ghost, oo lafteeda lafteeda kuugu fadhiya lacag dhab ah ujeeddadaas).
Dhinaca GNU / Linux, BSD iyo qoyska kale ee POSIX, sida caadiga ah Bash console-ka ayaa kuu yimaada inta badan kiisaska, tan iyo ugu yaraan, si aad u hesho caawimaad waa wax iska fudud oo keligeed, waxay kuu oggolaaneysaa inaad kala soo baxdo buugga dhammaystiran koodhka ilaha iyo / ama faylasha muhiimadda muhiimka ah leh.
Marka laga hadlayo ciyaaraha, qaar badan oo ka mid ah server-yada South Korea ee F2P sida Softnyx, Webzen iyo kuwa adeegyada sida Netmarble oo ka socda CJ Internet iyo Hangame oo ka socda NHN Corp. inta badan waqtiga waxay adeegsadaan Windows Server oo leh SQL Server si ay ugu shaqeyn karaan si macquul ah . Si kastaba ha noqotee, marka la ilaalinayo macluumaadka keydka macluumaadka, waxay doortaan inay hawlgeliyaan adeegyada waqti aan ahayn waqtiga ugu sarreeya si looga hortago waxyeello kasta oo sheegay in keydka xogta ay la kulantay khiyaanooyinka iyo / ama sidoo kale mid ama arrin kale oo muhiim ah (haddii si kale loo dhigo, waxay ma qaban karo shaqadan oo kale "kulul", maadaama tani ay si weyn u saameynayso waxqabadka server-yada).
Illaa iyo hadda, noocyada kaliya ee Windows ee runtii loo qaadan karo wax badan waa noocyada "gundhigga", maaddaama ay noo oggolaanayaan inaan dooranno xulashooyinka aan runtii dooneyno inaan adeegsanno, illaa iyo haddana, noocyadan ayaa ah kuwa loogu isticmaalka badan yahay heerka u heellan Kombiyuutarrada loogu talagalay ciyaaraha. Ciyaaraha casriga ah ee arcade ee ay sameeyaan shirkadaha Japan sida Konami iyo Sega (Andamiro wuxuu Linux ugu adeegsadaa mashiinadiisa qoob ka ciyaarka sida uu maqaal hore ku soo qoray).
Si kastaba ha noqotee, lama yaabin tirada isticmaaleyaasha runtii doonaya inay isku dayaan GNU / Linux sababtoo ah kala duwanaansho ay haystaan, marka lagu daro xaqiiqda ah in adeegyada F2P ee ay bixiyaan shirkadaha qaar ka mid ah qaybahaas sida Aeria Games iyo Valve's Steam ka hoos shaqeeya GNU / Linux iyo BSD oo leh waxqabad wanaagsan oo ku saabsan iskuxirka F2P, siday u kala horreeyaan.
Kaliya waxaan ka aqriyaa waxyaabo xun daaqadaha ??
QOF WALBA wuu ogyahay in Windows uusan aheyn nidaamka ugu waxqabadka badan, laakiin taasi maahan sababta ay u xun tahay!
Hagaag, ma jiro wax ka dhiirogelin badan boostadaada. Dhammaanteen halkaas ayaan ku soo marnay, waxaan u dhigayaa Linux yar yar waxaanan ku siinayaa sababta oo dhan adduunka, server-yada leh 4 sano oo keliya, waxay u socdaan sida qoolleyda oo kale, waxaad moodaa inay leeyihiin miiska loo qorsheeyay inay u soo jeediyaan maamule: Waan gaboobay, mid cusubna iigu beddel.
Waxaan kaliya ku dari lahaa "dabinka" ku qarsoon server-yada daruuraha leh daaqadaha ayaa ah inay kaa dhigayaan qorshe ku habboon qiimaha, laakiin daaqadaha ayaa loogu talagalay inay cunaan ilaha, markaa waxaad u baahan doontaa inaad ku ballaadhiso qorshahaaga daruurta: wan, disk, diirkja, ... iyo waxaad bilowdo inaad kubixiso wax la awoodi karo, waxay kudhamaanayaan sii kordheysa gaar ahaan.
Waad salaaman tahay, ma i caawin kartaa, waxaan rabaa inaan iibsado vps, laakiin waxaan ahay newbie wax fikrad ahna kama haysto sida ay tahay, Linux waxaan ahay newbie usbuuc ah oo aan rakibo, maxaa yeelay waxaan ka haajirayaa Xp.
Waa hagaag waxaan kugula talin lahaa haddii aad jeclaan lahayd inaad ka iibsato vps gudaha http://www.truxgoservers.com/
Waxay ka badan tahay foomamka 350 ee bixinta iyo in ka badan 15 goobood oo server ah
http://sales.truxgoservers.com/vps/index.php Dhaqaalaha vps waxay horeyba ugu tiirsaneyd deegaanka, sicirka waa ku jaban yahay usa iyo europe
Ku jawaab Sarutobi
Xog aad u xiiso badan. Kuwani waa shakiyo ay tahay in la caddeeyo si adeegsaduhu u dooran karo midka ku habboon isaga, salaan.
Ku jawaab Axarnet
Kula ciyaar fiidiyowgii hore SuperNintendo fiidiyowyada Linux-ka oo leh 'ZSNes'
Xilliga kama dambaysta ah: terminaal u taagan soo jiidashadiisa muuqaal ahaan